Ibandla licela usizo ngendlu yesonto | News24
Ibandla licela usizo ngendlu yesonto
ISITHOMBE: sithunyelweIndlu yesonto eyakhiwe yangaqedwa.
IBANDLA i-Holy God Church of Christ elisendaweni yaKwaMafunzwe e-Elandskop lithi licela usizo kunoma ubani ongalilekelela ekutheni likwazi ukuphothula indlu yalo yesonto eliqale ukuyakha ngonyaka owedlule.
Laba bazalwane abalinganiselwa kwabangama-60 sekuphele iminyaka engama-20 bekhonzela endlini esemzini womuntu ngoba bengenayo indlu yabo yesonto abangakhonzela kuyona.
UMnu Nkosinathi Mtolo oyilunga laleli bandla uthe indlu akade bekhonzela kuyo nabasaqhubeka ukukhonzela kuyona namanje isemzini womuntu ongomunye wamaluga ebandla.
Ekhuluma ne-Echo uthe ngonyaka owedlule basukumile beyibandla bahlanganisa bazama ukwakha indlu yabo yesonto kodwa manje isimile ayisaqhubeki ngoba abasenayo imali yokuqhuba umsebenzi.
“Inkinga esibhekana nayo kakhulu njengoba sikhonzela emzini womuntu ukuthi uma ngabe kukhona umcimbi okanye isifo esivelile asikwazi ukukhonza ngoba kusuke kufuneka ukuthi sibanikeze isikhala sabo nabo.
“Enye inkinga esibhekana nayo ukuthi uma ngabe amalunga esonto ekhona wonke esontweni ngalelo langa kuba khona inkinga yokuthi abanye abazalwane bagcina sebekhonza beme emnyango ngezinyawo ngoba indawo incane,” kubeka yena.
Uqhube wathi akudingi ukuthi umuntu osizayo aze abanikeze imali kodwa angabanikeza izinto zokwakha.
“Indlu yethu yesonto isishoda ngophahla kuphela nje.Noma umuntu usengasinikeza noma okokuvala phezulu ukuze nathi sizokwazi ukuthi sikhonze kahle njengabo bonke abazalwane.”
Noma ubani ongathanda ukusiza angathinta uMnu Mtolo enombolweni ethi: 076 341 8480.